Shina : Ny Vato Tsy Azo ivalozana Amin’ny Famaizana an’i Zimbaboe, Jerena Avy Any Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Septambra 2018 16:42 GMT
Vakio amin'ny teny македонски, Français, Italiano, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Jolay 2008)
Vao haingana i Shina no nandefa fitaovampiadiana ho ao Zimbaboe, tena hoe vao vita ilay fifidianana ho filohampirenena nahabe resaka tao amin'io firenena io. Taorian'ireo fiampangàna herisetra politika, sy ny nahalany indray ny filoha Mugabe, nifamatotra tamin'i Rosia i Shina tao amin'ny Filankevi-pilaminan'ny Firenena Mikambana, tamin'ny herinandro lasa, mba hanohitra amin'ny vato tsy azo ivalozana an'ireo sazy napetraka hamaizana an'i Mugabe sy ireo mpiaradia aminy. [jereo ny fanavaozana ery ambany]
Tapaka ny hevitr'ilay bilaogera tsy miankina, Ruan Yifeng, fa hanoratra ao amin'ny bilaoginy momba ilay vato tsy azo ivalozana, natombony tamin'ny fisarihana ny saina amin'ny hoe hatraiza no mampisy lanja ilay raharaha eo anivon'ny sehatra iraisampirenena, porofon'izany ny fandrakofana be atao azy io eny anivon'ny fampahalalambaovao tandrefana. Nanakiana an'i Shina daholo ny ankamaroan'ireo lahatsoratra teny anglisy hitany. Tsindriany fa tsy fantany izay tena zavatra mitranga, sy ny hoe karazana toerana manao ahoana moa izany Zimbaboe izany.
Miainga amin'io, nangoniny ireo tarehimarika vitsivitsy momba ny tahan'ny fidangan'ny vidimpiainana amin'izao fotoana izao, ny toedraharaha ara-toekarena, ny dingana nodiavin'ingahy filoha Mugabe, ary fanazavana fohifohy momba ireo antony nahatonga ireo herisetra taorian'ny fifidianana, avy eo navoakany ity sarintany manaraka ity :
Tsy sarotra jerena, i Zimbaoe dia firenena iray tampin-dalan-kaleha tanteraka. Raha ny marina, efa eo amoron-tevan'ny ady an-trano sahady izy.
Satria efa rotehan'ny ady sivily ilay firenena, maninona no lavin'i Shina ny fandraràna ireo famatsiana fitaovampiadiana?
Tsy zavatra mora io raha ny marina, tsy toy ny anamafisan'ilay mpitondra tenin'ny Ministera misahana ny raharaham-bahiny azy, satria manana tombontsoa goavana ao Zimbaboe i Shina.
ary lavidavitra kokoa :
Araka izany, hitanareo fa miditra lalina amin'ny raharaha anatiny ao Zimbaboe i Shina, manitsakitsaka tanteraka ny lalànan'ny ‘tsy fitsabahana amin'ny raharaha an-tokantranon'ny firenena hafa”. Pékin no mamatsy vola, basy ary manofana ny tafiky ny fitondran'i Mugabe. Ao anatin'izany rehetra izany, tsy misy azony natao tao amin'ny Firenena Mikambana afa-tsy ny nampiasa ny vato tsy azo ivalozana teo an-tànany nandritra ny fikatsahana vahaolana momba ireo sazy.
Tsy ankehitriny aho no handeha hanombantombana ireo antony anohanan'i Pekin an'i Mugabe. Tiako fotsiny ny mba hitanisa ampahany iray avy ao amin'ny Peking Duck, izay manoritsoritra ny fifanintonana natoraly mampifamatotra ny andaniny sy ny ankilany:
[dikanteny shinoa nataon'i Ruan]
Hatrany hatrany, loza mitatao ho an'ny fanantenana sy ny fikasana hametraka demaokrasia manerana ny tany no fahitàna an'i Shina.
Sokajiana ho miezaka mafy ireo politisiana shinoa ny hanaparitaka ny teorian'ny fahombiazana ara-toekarena avy amin'ny alàlan'ny fanjakana iray foibe matanjaka sy maherisetra, izay mety haharesy lahatra ny mpitondra any amin'ireo firenena mahantra, tsy manana ny fanohanana feno avy amin'ny vahoaka, mba hamafàna ireo fepetra motraka momba ny demaokrasia ary hanamafy ny fahefan-dry zareo miaraka amin'ny fialàna bàla hoe hanatsara ny ara-toekarena izany.
《圣经》里说：“惟愿公平如大水滚滚，使公义如江河滔滔。”（Mba hisosa toy ny rano anie ny rariny, ary ny hatsarampanahy ho toy ny renirano mahery! ）中国这个国家，不仅自己国内没有公平和正义，还阻碍他国和世界上广大受压迫人民的公平和正义。我作为一个中国人，真的感到非常遗憾和无奈。
Toy izany indrindra no zavatra mitranga, ireo rehetra mpanao jadona dia mifandokandoka izy samy izy, tsy misy hafa amin'ireo fitondràna tsy refesimandidy izay mifankatia sy mifanohana. Mihevitra aho, tena avy ao am-poko lalina, fa aleon'i Pekin kokoa mifampiraharaha amin'ireo mpanao jadona, toy izay hiaraka aminà governemanta demaokratika. Izay tsy hitanareo nandritra ny dian'ilay afo olaimpika, dia ireo hetsipanoherana nitranga nanerana ireo firenena demaokratika rehetra. Etsy ankilany, nisosa tsy nisy nanohintohina ny zavatra rehetra.
Fanampiny, raha toa i Pékin mitazona ny toeran'ny «naman'ireo mpanao jadona» ao anatin'ireo fifampiraharahana miaraka amin'i Etazonia, dia sady efa vonona ihany koa ny hahazo tombony amin'izay zavatra babo eo izy. Ny olan'ny nokleary ao Korea avaratra no ohatra tsara indrindra amin'izany.
Voasoratra ao anaty Baiboly ny hoe : «Mba hisosa toy ny rano anie ny rariny, ary ny hatsarampanahy ho toy ny renirano mahery! !» Shina tsy hoe fotsiny firenena iray tsy misy fitoviana sy rariny ao anatiny, fa koa manakana ny fitoviana sy ny rariny tsy hisy any amin'ireo firenena hafa ary mamoritra fatratra ny vahoaka ao aminy. Amin'ny maha-shinoa ahy, tena mahatsiaro malahelo tsy misy toy izany aho no sady mivala-ketraka.
Nirian'i Zhang ny mba handikàna ireo fanehoankevitra tao amin'ny lahatsorany. Indreto àry :
…dia nifanome tànana i Hitler sy URSS mba hizaràna an'i Polonina.
Tsia, tsy vitantsika ny handeha hamorona faribolana ahafahana manao tsindry aloka any amin'ireo faritra toa an'i Etazonia sy Angletera, fa tsy maintsy hoe toerana lò toa an'i Zimbaboe no alehantsika.
1.Koa satria tsy nisy ny fifanarahana niraisan'ny rehetra mba handraràna ny famatsiana fitaovampiadiana, nahoana i Shina no tsy ho afaka hivarotra fitaovampiadiana ? Ary iza no firenena mpanondrana fitaovampiadiana betsaka indrindra eto an-tany ? Tsy eritreretinareo ve hoe lasa milamna sy demaokratika izao ry zareo, sa tsy izany ? Raha toa ka mpankamamy amerikàna ieo Zimbaboeiàna manana fahafahana mividy fitaovampiadiana, ahoana no mety ho safidy nataon'i Amerika ?
2. Amin'ny maha-firenena azy, afaka misafidy izay làlan-kizorany sy hoavin'ny fireneny i Zimbaboe. Raha tsy nisy fitaovampiadiana, dia ho nitsahatra koa ve ny adilahy ? Matahotra aho hoe tsia. Mampalahelo ny hiteny izany, saingy izay no zavatra nisy, tsy nisy tazana afa-tsy ny fitohizany mandra-pahazon'ny iray amin'ireo mpifanandrina ny fandresena. Betsaka ny olona maty ary andian-taranaka iray manontolo no very tao anatin'ny ady. Raha toa ianareo misisika ny hanaovan'io firenena io ny zavatra arosonareo ho ataony, tsy efa fanaovana didiko fe-lehibe sy tsy refesi-mandidy ve izany ?
Timor Atsinanana 1 herinandro izay